Mkpesa mmebi iwu nke patent n'etiti Apple na Samsung laghachiri na mmalite ya | Androidsis
Igha iwu patentement n'etiti Apple na Samsung laghachi na mmalite ya
Iwu iwu patentement na-eche ihu abụọ n'ime ụlọ ọrụ teknụzụ kachasị ukwuu n'ụwa, Apple na Samsung, na-agagharị na usoro iwu iwu US niile ruo afọ ise na ugbu a, afọ ise ọ bidochara, e zighachila ya ebe o si malite.
N'oge ya, Samsung kwadoro mkpebi nke Courtlọikpe Kasị Elu nke kpebisiri ike na mmebi ọ bụla na mmebi iwu nke patent ga-etinyerịrị ya n'otu n'otu n'otu ngwaọrụ, ọ bụghị maka ya dum. N'ihi ya, e kwubiri na enweghi ike imebi mmebi iwu nke patent patent dabere na ngụkọta ahịa niile nke ngwaọrụ.
Ugbu a, dịka gụọ en Onye na-enye Apple, lọikpe Mkpegharị Ikpe nke United States maka Federal Circuit eweghachiri ikpe Apple na Samsung a Northernlọikpe Ugwu Northern nke California, kpọmkwem nke ahụ bụ ụlọ ọrụ gị. Nke a bụ ebe ọ malitere afọ ise gara aga, mgbe mbụ apple apple gbara akwụkwọ na Samsung. Ma ugbu a, ụlọ ikpe a ga-edozi okwu a ọzọ, nke nwere ike ịmalite usoro ọhụrụ maka mmebi nke nwere ike ịdịgide ruo ọtụtụ afọ, ọ bụrụhaala na otu n'ime ndị ọzọ ekwenyeghị na mkpebi ahụ wee kpebie ịrịọ ikpe ahụ.
Site na otu ụbọchị, Apple rịọrọ ka Samsung kwụọ ụgwọ dabere na nbibi nke ịda iwu ya maka ngụkọta ahịa nke ngwaọrụ ya. Companylọ ọrụ ahụ nwere mmeri ụfọdụ n'oge na n'ezie, ndị juri California, na 2012, nyere ya $ 548 ijeri ụgwọ. Mana Samsung rịọrọ na ego ahụ belatara $ 2015 nde na South Korea kwetara ịkwụ ụgwọ na XNUMX.
Gịnị ga-eme site ugbu a gaa n'ihu?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Igha iwu patentement n'etiti Apple na Samsung laghachi na mmalite ya
Mgbapụta zuru ezu, Mgbakọ zuru ezu dị iche iche site na ndị gam akporo ndị ọzọ
Esi hazie oku mberede na ekwentị gị